Sii waditaanku Micnaheedu Ma Aha Joogista Guriga? | Martech Zone
Sii waditaanku Micnaheedu Ma Yahay Joogista Guriga?
Khamiis, May 31, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waan jeclahay muusikada, laakiin kamaan soo xaadirin riwaayad sannado badan.
Waan jeclahay isboortiga, laakiin ma aanan ciyaarin sanado (guntintuna waxay bilaabaysaa inay muujiso).
Waan jeclahay cunno aad u fiican, laakiin waxaan cunaa qashinka.
Waan jeclahay tiyaatarka, laakiin ma arag riwaayad tan iyo markii aan ku noolaa Denver.
Waan jeclahay inaan u baxo biir, laakiin waxaan kaliya dhowr jeer ka maqnaa sanadkii la soo dhaafay.
Waan jeclahay filimada, laakiin marar dhif ah ayaa taga.
Waan necbahay jimicsiga, sidaas darteed waxaan u shaqeeyaa si aan joogsi lahayn halkii. Oo way tusaysaa!
Intii uu la kulmayey lamaane ganacsato ah oo maxalli ah, mid ka mid ah ayaa ka hadlay sida ay nafistiisa u cusbooneysiisay - wuxuu goor hore soo kacaa iyo baaskiilado 20 + mayl ah. Runtii wax badan baan raaci jiray… Waan jeclahay baaskiil wadista (in kastoo aanan hubin in La-Z-Boy uu kursiga baaskiilka sameeyo). Waxaan ku kaftamay inaan runtii u baahanahay hab aan ku dhisno kombiyuutar leh baalal. Bal qiyaas, waxa jira wax la mid ah! Tony Little waxaa saaran dusheeda PC Gamer Baaskiil! Taasi runti maahan jawaabta, inkasta oo ay tahay? Layligayga u keen shaqadayda maxaa yeelay shaqadaydu waxay cuni doontaa naftayda? Waxaan u maleynayaa maahan.
Gelinkii dambe ee maanta, waan la sheekaysanayay Julie iyo Julie waxay bilawday inay xusto dhamaan meelaha kuleylka ah ee muusikada, farshaxanka, iyo madadaalo. Waxaan imanayaa 5 sano Indianapolis gabi ahaanba waan ka xishooday inaanan runtii la kulmin mid ka mid ah waxyaabihii waaweynaa ee ay lahayd. Markii ay Julie hoos ugu dhacday liiska… Yat, White River State Park, Eagle Creek, Verizon Ampitheatre, Matxafka Eiteljorg, Indianapolis Zoo, Indiana State Museum, iyo tan kale… Ma aanan tagin midkoodna. Waxaan tagay Madxafka Carruurta, qaar ka mid ah AAA Indian's baseball-ka, dhowr lammaan oo Pacers ah iyo labo ciyaarood oo Colts ah… laakiin waa intaas.
Hadafkeyga si aan u dhiso baloog fantastik ah oo aan ku noqdo teknoolojiyad weyn, runtii waan dayacay waxyaabihii aan aadka u jeclaa! Muddo 5 sano ah hadda waxaan siiyay maalmahayga, habeennadayda iyo dhammaadka usbuucyada shaqaaleeyaashayda - waxaanna ka shaqeeyay balooggeyga inta udhaxeysa. Maalinna iima dhaafto oo waxaan heystaa qof ka shaqeeya ama shabakaddeyda oo i caayaya, waana jeclahay inaan siiyo. Marnaba ma dhaho maya. Markii aan qorayay qoraalkan, waxaan ka caawiyay saaxiib dhalinyaro ah wiilashayda dejinta xog-ururin MySQL ah oo ku saabsan nidaamkiisa adoo adeegsanaya XAMPP. Waxaan rajeynayaa inaan si aad ah uga caawiyo sanadka soo socda - wuxuu i weydiistay inaan noqdo la-taliyihiisa mashruuciisa sare ee sameynta codsi websaydh ah.
Waan ku qanciyay qof kasta oo hareerahayga ah taas waa sababta aan halkan u joogo waana taas waxa aan ku fiicanahay. Marar dhif ah munaasabadda ayaa ka dhacda meeshii aan u maleynayo in lay isticmaalayo. Waxay noqon doontaa dagaal culus oo lagu beddelayo rajada ay dadku iga qabaan. Waxaan rabaa inaan sii wado caawinta meesha loo baahan yahay, laakiin kuma xirmayo nolosheyda gaarka ah.
Markii aan ku maqnaa San Jose sanad ka hor, waxaan gabi ahaanba la yaabay sida ay qaybta farsamadu u sii wadato firfircoonida bulshada. Habeen kasta oo la bixiyo, waxaa jiray dad isku soo urursaday magaalada oo dhan. Waxaan dhagaystay markay dadku ka hadlayeen meesha ay imika ka baxeen, ama salaamayaan qof ay ku arkeen dhowr toddobaad ka hor dhacdo kale. Dad badan ayaa tagay riwaayado, makhaayado, ama dhacdooyin kale oo wadajir ah. Indianapolis, inta aan ogahay, waxaa ka maqan 'nolosha habeenka casriga ah'. Waan ogahay inaan halkan ku hayno kooxaha isticmaala SQL, .NET iyo Flex 'laakiin kuwani waa yawnathons. Inbadan oo dadka ka mid ah oo fadhiya qol daawanaya Powerpoint xun (Anigu waxaan ka mid ahay raggaas… Waxaan dareerayay Hordhacdayda Blogging powerpoint labadii toddobaad ee la soo dhaafay) runtii aniga ima xiiseeyo.
Meesha ugu dhow ee aan ku raaxeysto ayaa ah kaqeybgalka Naadiga Buugta Indianapolis ee deegaanka. Caqli quduus ah, waa inaan jiraa 80 sano! Waxyaabaha ugu muhiimsan ee isku xirka bulshada (runta ah, maahan mid muuqaal ah) waa freakin 'Book Club'? Saaxiibbadayda wanaagsan Bill iyo Carla waxay isu diyaarinayaan safar ay ku galaan Yurub, waxaanan isku dayayaa inaan xoogaa akhris ah la qabsado. “Dhulku Doug… kani ma shaqeynayo!”.
Dadweynow waxay i weydiiyaan sida aan ula socdo teknolojiyadda sida aan sameeyo. Waa hagaag? Waxaan u maleynayaa inay sii caddaaneyso sida aan taas ku dhammaystiro, maahan? Waxaan iska dhaafey gabi ahaanba waxkasta oo noloshayda ah. Waxaan macno ahaan ku yeelan lahaa xafiis Aniak, Alaska, oo aan ku noolaado qaab nololeed firfircoon. Marka - waa kan su'aasha milyan ee dollar:
La socoshada micnaheedu ma aha inaad guriga joogto?
Ha u qaadan tan 'aniga' aniga oo liita - waa wax cagsi ah. Waxaan dejiyaa himilooyin naftayda iyo balooggeyga waxaanan ku guuleysanayaa si guul leh. Kaliya ma hubo inaan dejiyey yoolalka ugu caafimaadka badan! Waa waqtigii xoogaa isbeddel ah.
Waan sii wadi karaa oo ma joogi karo guriga. Waxaan bilaabayaa inaan isla markiiba ka shaqeeyo. Wax magdhow ah lama siiyo habeennada iyo sabtiyada iyo axadaha sidaa darteed waxaan u maleynayaa inay tahay waqtigii aan joojin lahaa inaan si bilaash ah ku bixiyo Ma jiro emayl dheeri ah, dukumiinti dheeri ah Waxaan u socdaa bandhig! Sidoo kale waxaan raaci doonaa baaskiilkeyga (taagan) subaxa hore. Berritana shaqada ayaan ka tagayaa goor hore si aan waqti ula qaato gabadhayda! Iyo… malaha taariikh ama laba ayaa ku soo dhow.
Waad ku mahadsan tahay Julie fikradda qoraalkan !!!
Teknolojiyadda Microsoft Photosynth
Mar labaad waad ku mahadsan tahay dhammaan caawimaadda aad isiisay. Aad baa loo qiimeeyaa. Waxaan u maleynayaa inaan nasiib u helay inaan ka helo qof aaggayga ah kaas oo ku siin kara aragti badan sidaad adigu u sameyso.
Waxaan rajeynayaa sanadka soo socda sidoo kale; in kastoo, liiska mashaariicda aan la aqbali karin mashruuca weyn ee sanadka soo socda laga sameynayo degel. Ma hubo 100% haddii ay tani ku jiri doonto waxa aan qorsheynayo inaan sameeyo, laakiin ma rajeynayo.
Ugu dambeyntii, waad ku mahadsan tahay inaad tahay blogger u heellan. Sidaad ogtahay, waxaan aqriyaa maqaalkaaga maalin kasta, waxayna ii noqotay isha ugu weyn ee hagista.
Waxaad tahay arday weyn. Waan jeclahay inta dadaal ee aad gasho ka hor waad ila soo xiriiri kartaa… waxay muujineysaa dadaal badan.
Adigana aad baa laguu soo dhoweynayaa! Waxaan rajeynayaa inaan arko waxa aad la timaado. Waad ogtahay, waxaan la kulmay cunuggii horumaray Dhacdo leh isna wuxuu ahaa da'daada. Shaki iigama jiro inaad sifiican uga gudbi doontaan awooddeyda waqti aan fogeyn!
Taasi way fiicnaan laheyd dareenka is-hagaajinta, laakiin markaa cidna uma aadi doono caawimaad. Haha. Ilaa iyo intaad had iyo jeer u joogto fikrad labaad.
Waxaan halkaan fariistay daqiiqado wanaagsan 10-15 kaliya waxaan qaadanayaa wax walboo aad qortay. Ninyahow, kani waa qoraal qoto dheer laakiin daacadnimo ka buuxo kuna dhiirrigeliya ninka ka dambeeya baloogga.
Aad ayaan u ahay sidaada oo kale Doug anigoo gelinaya inta badan waqtigayga soo jeedka iyo waliba hal il oo furan waqtiga shaqada iyo mashaariicda.
Wax aan bartay in yar ka hor waa wax aad halkan ku sheegto qoraalkaaga. Geeksyada nala mid ah waxay u baahan yihiin inay kacaan oo ay ka fogaadaan kombiyuutarka in yar.
Hadda ma dhahayo waxaan raacayaa baaskiil wadista masaafo dhan 20 mayl sida saaxiibkaa laakiin waxaan isku dayaa oo ka fogaadaa kumbuyuutarka laba jeer maalintii si aan u aado socod yar. Waxay iga caawineysaa fidinta lugaha iyo dhabarka waxayna heleysaa dhiigga qulqulaya.
Waxaan kugula talinayaa inaad isku daydo wax isku mid ah, xitaa haddii ay wax yar u socoto wadada iyo gadaal. Wax kasta oo yar ayaa caawiya.
Wixii ku saabsan noloshaada shakhsi ahaaneed, taasi waa wax fiican oo ku saabsan taariikh ama laba joogitaan, hadda iska hubi haddii aysan ahayn geek waxaanan ula jeedaa sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah, ka tag PocketPC-gaaga guriga ama dami ogeysiisyada.
Taariikhdaada sii taxaddar buuxa oo aad siin lahayd mashruuc koodh.
Mustaqbalkaagu wuxuu umuuqdaa Doug dhalaalaya. Dhamaanteen waa inaan soo marnaa heerar iyo hoos u dhac dhanka nolosha iyo shaqada ah. Waxay dhistaa dabeecad iyo wiil waxaan haysanaa qaarkeed 🙂
Nasiib wacan nolol, jacayl iyo shaqo. Waxaan ula jeedaa taas qalbiga Doug.
Waan ku faraxsanahay inaan noqonay saaxiibo, xitaa kor iyo hoos, wixii aan na dilin kaliya ayaa naga dhigaya kuwo xoogan…
Dhamaan waxyaabaha wanaagsan ee dhexdhexaadka ah. Nuff ayaa yidhi.
Anigana waan ku khushuucay inaan shinnida gashado si aad uga fogaato oo aad u raaxaysato. Runtii wax badan baa jira oo ku wanaagsan Indy! Dadka magaaladani waa kuwo qurux badan oo adduunkeenu wuxuu ahaan lahaa meel ka sii wanaagsan haddii aan dhammaanteen ku raaxaysan lahayn hareerahaaga. Beddelka adduunku wuxuu ka bilaabmaa beddelashadaada ADUUNKA.
@Julie: Ma aanan ogeyn in Doug uu xirxiray dabin 🙂
Waad ku mahadsan tahay ka caawinta Doug inuu ku dhiirrigeliyo inuu naftiisa qaado. Taasi waa wax laga naxo.
Waan oggolahay 100%, dhammaan waxyaabaha wanaagsan ee dhexdhexaadka ah.
Hadda, haddii aan heli karno sawir ah Doug oo xiran huwis, maalintaydu way dhammaystiri doontaa… hehe.
LOL. Waxaan ku shaqeyn doonaa sawirkaas. Waan hubaa in qaar ka mid ah asxaabteyda farshaxanka farshaxanka leh ee xirfadaha Photoshop waalan ay iga caawin karaan haddii DK uusan noqon doonin kaqeybgale diyaar. Hadda, waxaan hadda xaqiiqsaday in weedha ah "shinni in the bonnet" aan gebi ahaanba u oggolaaday bisadda inay ka soo baxdo boorsada aan anigu ahay dal ay ka muuqato gabadh magaalo ku taal meeshan wanaagsan.
Sawiradayda oo leh kabaha ayaa la burburiyey waqti hore, ka hor maalmihii webka.
Nice post Doug …… fadlan hubi inaad ka fogaato Treadputer 🙂
Cycleputer ayaa soo baxa waxaana laga yaabaa inaan wadahadalno! Halkaan waxaa jooga nin maxalli ah oo leh boosteejo 6 bandhig leh… Waxaan ku arkay sawir joornaalka hal mar. Isaga, dabcan, sidoo kale wuxuu leeyahay injineer nidaamkiisa waqti buuxa u gaar ah gurigiisa.
"Sawiradeyda oo leh shabaqa ayaa la burburiyay waqti hore, ka hor maalmihii webka."
Marka waxaan u maleynayaa inay tahay inaanan midkiinna dib ugu soo dhigin maalmihii Navy-gaaga anigoo xiran xarkaha? Aad baad u sakhraansanayd inaad xasuusato laakiin nin, waxaad ahayd hoot 🙂
guuto christian ah
Jun 1, 2007 saacadu markay ahayd 5:34 AM
Boosto weyn, oo aad gebi ahaanba sax tahay. Waxaan hadda ka shaqeynayaa PhD-ga oo aan isla mar ahaantaana ganacsi bilaabayaa, markaa anigu waan kula saxsanahay aniga oo la igu dayanayo inaad hoos u foorarsato toddobaad usbuuc ka hor kumbuyuutarkayga. Labo sano ka hor, aniga iyo xaaskeyga (haa haa, waana guursaday) waxaan go'aansanay inaan iska dhigno waqti "aan gorgortan lahayn" oo midba midka kale (ma naga gafin taariikh jimco ah 2 sano), iyo jimicsi (waxaan jimicsadaa ugu yaraan 1/2 saac maalintii). Waa kuwan waxyaabo yar oo aan qabtay oo si fiican u shaqeeya. Waxaa laga yaabaa inay waxtar u yeelan doonaan qof kasta oo halkaa jooga oo la halgamaya tan:
1. Waxaan isku dayaa oo keydsadaa wixii aqrin ee ay tahay inaan sameeyo, ka dib daabac oo akhri intaad baaskiil taagan tahay ilaa 1/2 saac. tani waxay qaadataa waxoogaa laqabsada, laakiin waxay a) iga dhigeysaa inaan soo jeedo inta aan aqrinayo waraaqaha sayniska iyo b) waxay dishaa 2 shimbirood hal dhagax (shaqo iyo jimicsi)
2. haddii aan ku xayiran yahay dhibaato gaar ah oo dhegdheg ah oo u baahan feker, waxaan u baxaa orod, jimicsi degdeg ah oo jimicsiga ah, ama ciyaar dhaqso leh oo kubbadda koleyga ah, waxaanan si gaar ah uga fikiraa mowduucaas markaan socdo. waa wax la yaab leh aragtida lagu kasban karo ka fekerka wax ku jira goob ka duwan, iyo endorfinnada waxoogaa sare u socda.
3. lataliyehaygu wuxuu qabtaa shirarka socodka, mararka qaarna waan sameeyaa mararka qaarkood. waxay ku fiican yihiin isbedelka aragtida.
ps ma ogtahay in Thomas Jefferson la soo sheegay inuu jimicsi 2 saacadood maalintii?
Jun 1, 2007 saacadu markay ahayd 7:45 AM
Taasi waa talo cabsi leh. Waxaan ku fiicanahay dejinta hadafyada iyo inaan ilaaliyo - Waxaan u maleynayaa inaan halkaan raacayo kuwaaga! Dhamaan 3da xal waa waxyaalaha aan isla markiiba sameyn karo… qaasatan 1 iyo 3. Waxaan galabta wareegayaa wareegga!
Mahadsanid - iyo sida ugufiican ee nasiib ah ee aad kuhesho PhD. Taasi waa guul la yaab leh. Waxaan rajeynayaa inaan ku laabto iskuulka oo aan helo MBA-ga. Ma hubo in PhD ay shaqadi ku jirto, laakiin waxaan jeclahay dugsiga si aad u caadi ah ayey u dhici kartaa. Waan arki doonaa waxa mustaqbalku keeno!
Waad ku mahadsan tahay dhiirigelinta iyo talooyinka!
Jun 1, 2007 saacadu markay ahayd 6:10 AM
Doug, marwalba waan jeclaa akhrinta balooggaaga laakiin kani runti gurigay ila dhacday. Waxaan dareemay inaad i sifeyneyso markaan aqrinayay. Waxaan u maleynayaa inay fiicantahay in la ogaado in badan oo sidayada oo kale ah ay jiraan. Waad ku mahadsantahay xisaabtanka naxariis darada ah ee noloshaada. Iyo nasiib wacan "mustaqbalka"!
Jun 1, 2007 saacadu markay ahayd 7:38 AM
Thanks Patric! Uma maleynayo in dadkiinnu ay wax badan oo isbeddel ah ku arki doonaan halkan baloogga… badanaa waxay ku xirnaan doontaa shaqadeyda iyo caadooyinkeyga caafimaad ee ka baxsan baloogga. Haddii qoraalkani ka caawiyo kuwa kale inay fiiriyaan naftooda, taasi waa wax aad u fiican!
Dabcan, maalintayda cusubi waxay kubilaabatay anigoo saakay saaran mootada jimicsiga waana ay dhimatay. Waxaan u maleynayaa inay halkaas ku jirto batari meel u baahan in la beddelo labadii sanaba mar… Kaliya waa inaan helaa!
Jun 1, 2007 saacadu markay ahayd 11:02 AM
Tag! Mike miyaad ka fiirsatay baaskiilkiisa aan korontada ku jirin halkaas xalay! Waxaan sii soconnay beryahan dambe, sidoo kale.
Jun 1, 2007 at 1: 41 PM
Waad ku mahadsantahay wadaagidaada inbadan oo naftaada ah. Waxaan u maleynayaa in qaar badan oo naga mid ahi aynnu isku doon ka heli karno! Markii ugu horreysay ee aan billaabo balooggeyga, aad ayaan ugu mashquulay waxaan ku dhammaaday dayacaad dadka ku hareeraysan. Way fududahay in “guriga la joogo” oo “lala xiriiro” kumbuyuutarka iyo dhammaan asxaabteyda wax ku qora baraha internetka (oo aan aad u jeclahay!). Dhowrkii bilood ee la soo dhaafey, waxaan u soo baxayey qaar ka mid ah dhacdooyinka bulshada ee xirfadleyda ah iyo sidoo kale sameynta xiriirinta maxalliga ah (halkan San Diego, aad ayey muhiim u tahay in lala xiriiro maxalliga ah!). Tani runti waxay siisay tamar iyo kor u qaadis kaliya noloshayda laakiin sidoo kale ganacsigeyga.
Marnaba blog ma dhigto maalmaha fasaxa ah, iyo sida ay u adag tahay, mararka qaarkood xitaa ma daarto kombuyuutarkayga dhammaadka usbuuca! Dhejinta gidaar u dhexeeya shaqada iyo nolosha shaqsiyeed aniga muhiim ayey ii tahay.
Hadda, Doug, halkaas u bax oo waxaad leedahay usbuuc dhammaad wanaagsan! Dhageyso warka duhurnimo 🙂
Jun 1, 2007 at 3: 46 PM
“Maalinteyda cusub waxay ku bilaabatay anigoo saakay baaskiilkeyga ku socda oo aan dhintay. Waxaan u maleynayaa inay halkaas ku jirto? Batari halkaas ku yaal meel u baahan in la beddelo labadii sanaba mar? Kaliya waa inaan helaa ”
Waxyaabaha kale oo dhan waa fashilmaan, akhri buuga 🙂
Waxay u badan tahay inay ku taal aagga ay soo bandhigtu ku taal… raadso wax yar oo ka mid ah albaabka dabinka.
Haddii cimiladu saamaxdo, waxaa laga yaabaa inaad u tamashleeysid fiidkan fiidkii… taas oo dhiiggaaga qulqulaysa.
Jun 1, 2007 at 4: 15 PM
Waxaad nasiib u leedahay inaadan ku nooleyn agtayda, waxaan leenahay biir todobaadle ah ama badanaa badanaa, xitaa waxaan tagi karnaa qolka jimicsiga! Waxaad tahay xiriiriye hibo leh.
cajaladda khadka internetka 'engtech @ internet
Jun 1, 2007 at 4: 28 PM
Tani waa sababta aan u ahay "anti-breaking-news".
Had iyo jeer waxaa jira warar jabis ah, iskuday inaad ku sii hayso korkiisa marwalba waa wax aan macquul aheyn. Diirad saarida barashada, horumarinta xirfada, iyo waxaad ka qaadan karto waxay macno badan u yeeleysaa mustaqbalka fog.
Jun 1, 2007 at 4: 43 PM
25 Talooyin Caafimaad oo Bilaash ah oo loogu talagalay Nerifiyeyaasha Kombuyuutarka ”.
A wanaagsan caafimaad-toddobaadle ah!
Jun 4, 2007 at 4: 54 PM
Oo waa kan beddel caafimaad leh shirarka taleefanka> / A>.
Jun 7, 2007 saacadu markay ahayd 5:23 AM
Oo weliba link kale:
Tusmada muuqaalka cuntada fudud 🙂
Jun 7, 2007 saacadu markay ahayd 7:12 AM
Xumus. Caqli! Ma jiraan Baararka Snickers halkaas? 😉
Jun 7, 2007 saacadu markay ahayd 7:45 AM
Eeg saaxiibkay. Waxaa jira jawaab inaad raadiso.
Jun 2, 2007 at 3: 33 PM
6/2/07 – mid baa mid ah!
Jun 2, 2007 at 7: 49 PM
Waxaan u qaatay eyga socod dheer maanta, laakiin waa la qirayaa, maanta oo dhan waan shaqeynayay 🙁